Ahoana ny fanatsarana ny fahombiazan'ny ekipa mpivarotra anao | Martech Zone
Ahoana ny fanatsarana ny fahombiazan'ny ekipan'ny varotrao
Zoma, Febroary 10, 2017 Zoma, Febroary 10, 2017 Douglas Karr
Betsaka ny namako no olona mpivarotra. Raha ny marina dia tsy nanaja tanteraka ny asan'izy ireo aho raha tsy nanomboka ny orinasako manokana ary nanindrona izany. Nanana mpihaino tsara aho, fifandraisana matanjaka amin'ireo orinasa manaja ahy, ary serivisy lehibe ilain'izy ireo. Tsy nisy n'inona n'inona izany fa ny faharoa niditra teo am-baravarana aho nipetraka tamin'ny fivorian'ny fivarotana!
Tsy nanao na inona na inona aho hanomanana ny tenako ary tsy ela dia nahita olana. Nanomboka niofana niaraka tamin'ny mpanazatra iray izay nitondra ahy teo ambanin'ny elany aho, nahafantatra ahy sy izay nahalalako azy, avy eo nanampy ahy hamorona paikady manokana azafady rehefa nanenjika mpivarotra niaraka tamin'ny vinavina. Nanova ny orinasako izany, ary izao dia mijery ireo mpivarotra lehibe manodidina ahy aho talanjona amin'ny fomba itadiavany ny fifampiraharahana.
Indray andro, manantena aho fa handray ekipa mpivarotra. Tsy hoe tsy tiako izao - fa fantatro fa mila mahazo ny olona mety eo am-baravarana aho izay afaka manampy antsika hahatratra ny mety ho vitantsika. Mijery orinasa maro aho manakarama, manome vola ary mivezivezy amin'ny mpiasan'ny varotra tsy manana traikefa ary tsy afaka mandeha amin'io lalana io aho. Tianay ny hikendry sy hahita ireo orinasa mety hiaraha-miasa, avy eo manana olona manam-pahaizana ampy hisarika azy ireo hamaky ny varavarana.
Ho anao izay manana ekipa mpivarotra, ity infographic avy amin'ny Healthy Business Builder ity dia manome Fomba 10 hanatsarana ny fahombiazan'ny varotrao.
Ny tsy fahombiazan'ny varotra dia afaka miditra lalina amin'ny orinasanao ary mety hiteraka vokany lehibe raha tsy voaresaka eo noho eo. Amin'ity sary ity dia hiresaka momba ny fomba isan-karazany amin'ny fomba hanatsarana bebe kokoa ny fahombiazan'ny ekipan'ny varotrao ianao mba hahafahan'ny orinasanao manohy mivoatra sy mandroso anio sy taona ho avy.
Fomba 10 hanatsarana ny fahombiazan'ny varotrao
Manomeza henjana fiofanana ary ny fanarahana.
aingam-panahy ny ekipan'ny varotrao.
Fantaro ny lakile hery isaky ny mpikambana ao amin'ny ekipa.
Tano ny mpivarotrao tompon 'andraikitra.
Omeo tsara ny ekipanao varotra tahirin-kevitra.
Mitondra tsy tapaka iray-on-iray fivoriana.
Manana holistic view an'ny mpanjifanao.
Aza mampiasa injeniera be loatra amin'ny anao fizotry ny varotra.
Tanteraho mitarika fikarakarana ary scoring firaka.
Hamarino tsara fa ny varotra, ny serivisy ho an'ny mpanjifa ary ny marketing mifanaraka ary Integrated.
Tags: mpanorina orinasa salamaahoana nomanatsara ny varotraFanamafisana ny varotravarotra infographicfahombiazan'ny varotrafizotry ny varotrafiofanana varotrafivarotana